Allison Green Manaraka ahy fitarihana fahitalavitra 12 Week amin'ny fivarotana amin'ny $ 47 - Fialam-boly
Home » workouts » Allison Green Manaraha ahy mandritra ny fandaharam-pianarana 12 Week amin'ny $ 47
Allison Green Manaraha ahy mandritra ny fandaharam-pianarana 12 Week amin'ny $ 47
Allison Green avy ao amin'ny fahitalavitra Bad Girls Club dia namoaka ny programa vaovao momba ny fanatontosana Follow Me Fitness. Ho an'ny fotoana voafetra dia azonao atao ihany ny hahazoana ny programa vaovao mozika Allison Green vaovao momba ny "Follow Me Fitness" 12 amin'ny vidin'ny $ 47
Manaraha Ahy amin'ny fitiliana dia programa famelomana 90 feno andro izay tapaka ao amin'ny fizarana 3 samihafa. Ny dingana tsirairay amin'ny fandaharanasa dia haharitra herinandro 4. Ny fe-potoana 2 voalohany an'ny Follow Me Fitness dia ao anatin'ny fe-potoana 3 isan-kerinandro, fa ny andro farany amin'ny programa dia andro 4 isan-kerinandro, miaraka amin'ny fampiofanana tsirairay maharitra hatramin'ny 1 ora. Ankoatra ny fampiofanana, Follow Me Fitness dia ahitana programa maharitra izay azo ampiasaina mandritra ny andro fitsaharana.
Kitiho eto mba hianatra bebe kokoa momba ity tolotra manokana manaraka manaraka ity
Janoary 12, 2018 FitnessRebates workouts 1 Comment
ProForm Cardio HIIT Oliptical Sale Sale
Ahoana no mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny hoditrao ny vatana manontolo?
Mihevitra ny iray "Allison Green Manaraha ahy mandritra ny fandaharam-pianarana 12 Week amin'ny $ 47"
Pingback: Manaraha Ahy amin'ny fitantanana ny Allison Green amin'ny Sale Now! - All About Fitness